Si qoto dheer u sii xarafkaaga ku muujiye muujiye adigoon u adeegsan 3D | Abuurista khadka tooska ah
Sii qoto dheer warqaddaada Sawirqaade
Rodrigo Santiago | | muujiye
Warqad la socota Sawirqaade waxay noo oggolaaneysaa inaan abuurno dhammaan noocyada qoraallada vectorized, oo leh faa'iidooyinka la qabsiga dhexdhexaadka iyo cabbirka aan dooneyno goor dambe. Si kastaba ha noqotee, way fududahay in lala dhaco barnaamij noocan oo kale ah qaab fidsan, fudud oo leh shakhsiyad yar. Siinta xarafkaaga qaab aad u kakan waxay noqon kartaa mid fudud sida ku darista qoto dheer qaabeyntaada.
Adigoon u adeegsan barnaamijyada 3D, talaabooyin yar oo fudud oo Sawir-qaade ah ayaa kuu oggolaan kara inaad sameysid tirooyin qoto dheer oo kuu oggolaanaya inaad naqshadahaaga ka dhigto kuwo muuqda. Markaa ka soo qaad inaan leenahay qaabeynta aasaasiga ah, dheh, hal xaraf.
Haddii aan dooneyno inaan si qoto dheer ugu darno warqadeena Sawirka iyo dhisida aragti, waa inaan nuqul ka dhignaa warqadan hore 2 jeer.
Marka xigta, u dhaqaaq xarafka ugu dambeeya maadaama ay ku jiraan nidaamka lakabka jihada aad rabto inaad abuurto aragtida.
Hadda waa inaad ku biirtaa xuruufta ugu dambeysa iyo xarfaha ugu dambeeya iyada oo loo marayo isku dhafka taas, waxaa ugu wanaagsan in la dejiyo xuduudaha fiyuuska kahor (Ikhtiyaariyada Waxyaabaha / Isku Darka / Isku Darka) oo samee talaabooyin gaar ah si looga fogaado culeyska kaarka garaafyada.
Hadda waa inaan doorannaa xarfaha ugu dambeeya iyo xarfaha ugu dambeeya oo aan abuurno isku-biirid (Shay / Fusion / Abuur).
Si loo kala saaro saameynta aragtida ee laga sameeyay wejiga hore ee warqadda, waxaa ugu wanaagsan in la madoobo midabka labada nuqul ee la mideeyay. Si tan loo sameeyo, waa inaad marin u heshaa liistada lakabyada, dooro labadaba oo beddel, kiiskeenna, midabka istaroogga.
Ugu dambeyntiina, haddii aan rabno inaan ku ciyaarno saameyntan xitaa in ka badan, waxaan ku siin karnaa laba midab oo kala duwan labada nuqul ee xarafka la isku daray oo sidaas ayaan ku abuuri karnaa saameyn midab leh.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » muujiye » Sii qoto dheer warqaddaada Sawirqaade
PIXL, ama dib u qeexida "LEGO" ee mustaqbalka